विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ८७ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? Canada Nepal
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १५:४६:५१ बजे : प्रकाशित
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ लाख ९६ हजार, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुन बढ्न थालेको छ । विभिन्न देशमा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाभाइरस देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमणका बीच विभिन्न देशमा कोरोना खोप पनि लगाइएको छ । वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक हेर्दा अहिले भारत लगायत केही देशमा संक्रमितको संख्या तिव्र रुपमा बढेको देखिन्छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १५ करोड ८३ लाख २७ हजार ६ सय २६ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ लाख ९६ हजार ८ सय ३५ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा १३ करोड ५७ लाख ७८ हजार ४ सय ८४ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ९५ हजार ५ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड ३४ लाख ५४ हजार ५ सय ८१ पुगेको छ । यस्तै अमेरिकामा २ करोड ६४ लाख ५ हजार ८ सय ७१ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ४ लाख २१ हजार ४ सय ८४ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड ५१ लाख ५० हजार ६ सय २८ पुगेको छ ।
बैशाख २६, २०७८ आइतवार १०:२८:१९ बजे : प्रकाशित
दिल्लीमा फेरि थप एक साता लकडाउन, केजरीवालले भने - लकडाउन गर्नु रहर नभई बाध्यता हो
काठमाडौं - भारतको दिल्लीमा लकडाउन एक साताको लागि थपिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण तिव्र गतिमा बढेपछि फेरि एक साता लकडाउन थप गर्ने मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले निर्णय गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमित बढ्दै जाने क्रम नरोकिए पछि लकडाउन लम्बाइएको केजरीवालले बताएका छन् । उनले लकडाउन नै कोरोना नियन्त्रणको मुख्य उपाय भएको र लकडाउन गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन् ।
अब लकडाउन १७ मे सम्म चल्ने भारतिय मिडियामा जनाइएको छ । यसअघि दिल्लीमा मे ३ र मे १० मा गरी दुई पटक लकडाउन बढाइएको छ ।
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ लाख बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ४१ सय बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ करोड १८ लाख ८६ हजार नाघेको पुगेको छ ।
बैशाख २६, २०७८ आइतवार १३:४९:५३ बजे : प्रकाशित
काबुलमा विद्यालय बाहिर तीन वटा बिस्फोट, विद्यार्थी समेत कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु
काबुल – अफगानिस्तानको काबुलस्थित एउटा बालिका माध्यमिक विद्यालय बाहिर भएका तीन वटा बिस्फोटमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ५० पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार शैयद उल सौहादा माध्यमिक विद्यालय बाहिर शनिबार अपराह्न ४ बजे भएको उक्त बिस्फोटमा अरु १०० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
काबुल प्रहरीका प्रवक्ता फरदौस फरामर्जले एउटा बिस्फोटको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा कार बम बिस्फोटजस्तो देखिएको बताए । अन्य दुई वटा बिस्फोटन भने बारुदी सुरुङबाट भएको प्रवक्ता फरदौसले बताए ।
विद्यार्थीहरु विद्यालय छुट्टी भएर आआफ्ना घरतिर जानै लाग्दा बिस्फोट भएको छ । अधिकांश पीडितहरु विद्यालयका केटाकेटी रहेको अनुमान गरिएको छ । बाटो हिँड्ने व्यक्तिहरुको पनि मृत्यु वा घाइते भएका प्रहरीको भनाई छ ।
अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो विद्रोही समूह तालिबान भने उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ । यस घटनामा इस्लामिक स्टेटको संलग्नता रहेको तालिबानको आरोप छ ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद अश्रफ घानीले उक्त आक्रमणको निन्दा एवं भत्र्सना गरेका छन् । उनले घाइतेको सर्वोत्तम उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।सिन्ह्वा
बैशाख २६, २०७८ आइतवार १४:१४:०१ बजे : प्रकाशित
चिनियाँ रकेटका भग्नावशेष माल्दिभ्स नजिक महासागरमा खसे
बेइजिङ – चीनको लङ मार्च ५बी रकेटका भग्नावशेष हिन्द महासागरमा आइतबार खसेको चिनियाँ अन्तरिक्ष इन्जिनियरिङ कार्यालयले जनाएको छ । गत अप्रिलमा प्रक्षेपण गरिएको उक्त रकेटले अन्तरिक्षमा चीनको पहिलो स्टेशन बनाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार चाङ झेङ ५बी नामको रकेट पृथ्वीको वायुमण्डलमा यही मे ९ तारिखको बिहान १० बजेर २९ मिनेटमा पुनः प्रवेश गरेको थियो, र उक्त रकेट हिन्द महासागरमा माल्दिभ्स नजिक खसेको थियो ।
पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नासाथ उक्त रकेटको अधिकांश भाग आगो लागेर ध्वस्त भइसकेको थियो, कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत बुधबार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अनियन्त्रित भएको चिनियाँ रकेटको आफूहरुले ट्र्याकिङ गरिरहेको जनाएको थियो । मन्त्रालयले यही साता उक्त रकेटका अवशेष पृथ्वीमा खस्ने बताएको थियो ।
शुक्रबार चीनले विज्ञहरुले चासो देखाए पनि अनियन्त्रित रकेटबाट पृथ्वीमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको थियो ।एएनआई
बैशाख २६, २०७८ आइतवार १९:०२:०३ बजे : प्रकाशित
# चिनियाँ रकेट
माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति नाशीदमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा तेस्रो व्यक्ति पक्राउ
माले - माल्दिभ्स प्रहरीले आइतबार पूर्व राष्ट्रपति तथा सभामुख मोहम्मद नशीदमाथिको आक्रमणमा सम्लग्नता रहेको भनी आरोपित तेस्रो व्यक्ति पक्राउ गरेको छ । आक्रमणमा सम्लग्नता रहेका भनिएका दुई आरोपितलाई प्रहरीले शनिवार पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरू गरेको बताइएको छ ।
“मे ३ मा पूर्व राष्ट्रपतिमाथि भएको आक्रमणका तेस्रो योजनाकारलाई आइतबार बिहान पक्राऊ गरिएको छ,” माल्दिभ्सको प्रहरीले ट्वीट गरी जानकारी गराएको छ । आज पक्राउ परेका आरोपित उक्त आक्रमणको ‘प्रमुख’ योजनाकारसमेत रहेको विश्वास प्रहरीले गरेको छ ।
राजधानी मालेमा बिहीबार बम बिष्फोटनमा ५३ वर्षीय नशीद घाइते भएका थिए । उनी अस्पतालमा उपचाररत छन् भने स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आएको बताइएको छ । नशीदको घरनजिकै भएको उक्त घटनामा दुई अन्य व्यक्ति घाइते भएका थिए ।
घाइते हुनेमा नशीदका अङ्गरक्षक र जसलाई एक विदेशी नागरिक पैदल यात्री घाइते भएका थिए । प्रहरीले नशीदमाथि भएको आक्रमणलाई आतङ्कवादी आक्रमण बताएको छ ।एएनआई
बैशाख २६, २०७८ आइतवार १९:५२:३२ बजे : प्रकाशित
# मोहम्मद नशीद
कोनाक्री – पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गिनीको उत्तरपूर्वी सिगुइरी क्षेत्रको एउटा सुन खानीमा पहिरो खस्दा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
रेडक्रसका स्थानीय अधिकारीहरुले खानीभित्र अरु मानिस पनि पुरिएको हुन सक्ने बताएका छन् ।पहाडको माथिल्लो भागबाट शुरु भएको पहिरो खानीमाथि खसेको थियो ।
पहिरोका कारण खानी भित्र कार्यरत मजदूरहरु थुनिएका वा माथिबाट ढुङ्गाले लागेको हो भन्ने यकिन हुन नसकेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।सिन्ह्वा
बैशाख २६, २०७८ आइतवार २०:२९:५७ बजे : प्रकाशित
# अफ्रिकी मुलुक गिनी